တစ်ခုလောက်လေးမေးချင်လို့ပါ... - MYSTERY ZILLION
လုလု PC မှာ My Computer ကိုပဲ open လုပ်လုပ်
တစ်ခြား software ကိုပဲ open လုပ်လုပ် Adobe Acrobat ကို install လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာကြီး run နေတယ်...:((:((:((ပြီးတော့ cancel လုပ်လိုက် လည်း install လုပ်ဖို့ CD တောင်းတာကျလာပြန်ရော အဲဒါတွေ
အဆင့်ဆင့် cancel လုပ်ပြီးမှ..လိုချင်တာပွင့်လာတာ..... သိပ်စိတ်ညစ်တယ်.......ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဟင် ..ပြောပေးဦးနော်....
Scan shoot လုပ်ပြချင်တယ်ဆိုရင် pic upload တစ်ခုခုမှာ အရင်တင်ပေးမှ ပေါ်မှာပါ။
http://tinypic.com/ မှာ ပုံကို အလွယ်တကူ အပ်လုပ်တင်လို့ရပါတယ်။
တစ်ခြား software ကိုပဲ open လုပ်လုပ် Adobe Acrobat ကို install လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာကြီး run နေတယ်...ပြီးတော့ cancel လုပ်လိုက် လည်း install လုပ်ဖို့ CD တောင်းတာကျလာပြန်ရော အဲဒါတွေအဆင့်ဆင့် cancel လုပ်ပြီးမှ..လိုချင်တာပွင့်လာတာ..... သိပ်စိတ်ညစ်တယ်.......ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဟင် ..ပြောပေးဦးနော်....
စက်ထဲမှာ Adobe Acrobat ရောရှိလားဗျ။ ရှိခဲ့ဖူးရင် အဲဒီကောင်ကို ကိုယ်ဘာလုပ်မိခဲ့သလဲဆိုတာပါ
စဉ်းစားဖို့လိုမယ်နဲ့တူတယ်နော်။ ပုံလေးတွေမြင်ရရင် စဉ်းစားလို့ပိုကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်ဗျ။
acrobat သုံး ရင်တော့ install ပြန်လုပ်ပေးလိုက် မသုံးရင် ဖျက်လိုက်
run ထဲမှာ msconfig ရိုက်ပြီး starup ထဲမှာ adobe ကို ရှာပြီး disable ပေးလိုက် အဲဆိုရပြီ
ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာက ဒီဗွီဒီဒရိုက်မှာ လိုက်စခရစ်ရေးလို့ရတဲ့ စနစ်ပါတယ်ဗျ
အကော်စတစ်စီဒီလေဘယ်မိတ်ကာ လည်း ဒေါင်းလုပ်ချပြီး စမ်းကြည့်တယ်
နီယိုနဲ့လည်း လုပ်လို့ရတယ်လို့ ပြောကြတယ် မအောင်မြင်ဘူး
ခွေရောင်းတဲ့ဆိုင်မှာ မေးကြည့်တော့လည်း သူတို့ ဆိုင်တွေမှာ စခရစ်လုပ်လို့ရတဲ့ စီဒီတောင် မရှိဘူး
ဗယ်လင်တိုင်းနီးလာပြီဆိုတော့ ချစ်ချစ်အတွက် စလင်းဘက် အဲဟုတ်ပေါင် ချစ်ချစ်ကို ယူလိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေ စုပြီး ခွေရိုက်ပေးချင်လို့
zaytoe wrote: »
ကျွန်တော့်ကွန်ပျူတာက ဒီဗွီဒီဒရိုက်မှာ လိုက်စခရစ်ရေးလို့ရတဲ့ စနစ်ပါတယ်ဗျ ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရတယ်ဆိုတာမသိဘူး
LightScribe သုံးနိုင်ဖို့က Drive ဖက်ကရော CD/DVD ဖက်ကပါ support လုပ်မှရမယ်နဲ့ တူတယ်ဗျ။
စခရစ်လုပ်လို့ရတဲ့ စီဒီတောင် မရှိဘူး
ဗယ်လင်တိုင်းနီးလာပြီဆိုတော့ ချစ်ချစ်အတွက် စလင်းဘက် အဲဟုတ်ပေါင် ချစ်ချစ်ကို ယူလိနဲ့လုပ်ထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေ စုပြီး ခွေရိုက်ပေးချင်လို့ကူညီပေးကြပါဦး
Sticker ပေါ်မှာ colour printer သုံးပြီး print လုပ်၊ CD ပေါ် ကပ်ပြီးပေးရင်ရော အဆင်ပြေလောက်လား။ CD ပုံစံ Sticker အ၀ိုင်းတွေရှိတယ်လေ။
run box ထဲက msconfig ကိုရိုက်ထည့်လိုက် အဲဒီထဲကမှ startup ကို၀င်လိုက် ။ ပြီးရင်အားလုံးကို Disable ပေးကြည့်ပေါ့။ သိသလောက်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း member အသစ်ပါ။
Zaytoe ရေ lightscribe ကအဆင်မပြေပါဘူး။
စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ DVD writer ၀ယ်စဉ်က ပါတဲ့ CD ထဲမှာ software တစ်ခါတည်းပါပါတယ်။ အဲဒါကိုသွင်းပြီးတော့ စမ်းကြည့်လိုက်ပါ။
lightscribe လုပ်တဲ့အချိန်က အရမ်းကြာပါလိမ့်မယ်။
နောက်ပြီး lightscribe လုပ်လို့ရတဲ့ CD နဲ့မှ lightscribe လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခြား CD ပြားပေါ်မှာ ဘာမှမပါတဲ့CD တိုင်းနဲ့မရနိုင်ပါဘူး။
ပြီးတော့ အဲဒီ lightscribe ရေးလို့ရတဲ့CD တွေက တစ်ပြားကို 1500 လောက်ပေးရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါကြောင့် အကြံပေးချင်တာကတော့ CD ပြားပေါ်မှာ ဘာမှမပါတဲ့ blank CD တွေရှိတယ်။ eg( somei အမျိုးအစား)
အဲဒီပေါ်မှာ color printer epson R230လို CD ပေါ်မှာ direct print လုပ်နိုင်တဲ့ printer နဲ့ ပုံတွေနဲ့ စာတွေကို တိုက်ရိုက် print out ထုတ် ရေးနိုင်ပါတယ်။
Adobe Acrobat ကိုသုံးလို့လား? (Adobe Acrobat Reader မဟုတ်ပါ)
မသုံးဘူးဆို၇င်တော့ uninstall လုပ်လိုက်ပါ။
သုံးတယ်ဆိုရင်လည်း uninstall လုပ်ပြီး ပြန် install လုပ်ကြည့်ပါလား?
start>control panel>add or remove program> ပြီးတော့ Adobe Acrobat ကိုရှာပြီးတော့Remove လုပ်လိုက်ပါ။
ဖြစ်နိုင်ရင် screen shot အပြည့်အစုံလေးတင်ပေးနိုင်ရင် ပြဿနာကို ပိုပြီးတော့ သိပြီး ပိုကူညီနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။
မရှိရင် တင်ပေးလိုက်။ ရှိရင် သေသေချာချာ ဖျက်ပစ်လို်က်။:d:d:d(ရှင်းရော)
လုလု မေးတာကို ခုလို ဂရုတစိုက်ဖြေပေးတဲ့ အတွက် အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် ....
လုလု ကအရင်ရက်ကတည်းက ဒီပိုစ့် ကိုတင်မလို့ ပါဘဲ...
ရေးထားတာတွေ အားလုံးပြီးမှ...log in ပြန်တောင်းတာ...၀င်လို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်
လုလု စက်မှာ defreeze တင်ထားတယ်လေ...
မေ့ပြီး မဖြုတ်မိတော့ ...ဘယ်လို remove လုပ်လုပ်မရဘူးဖြစ်နေတာ
Virus Scan Lite lay
I title mistake htwar tal.
LightScribable Cds Myanmar mhar ma ya laut thay bu htin tal. Mhar yin lae pyaw pay kya par own. Ta lat sa htae Zawgyi one shi yet nae' myanmar font ko ctrl+shift press pyi type tar myanmar font ma ya lote. ya ag load nyi pyaw pya par lar. :O
မြန်မာလိုဖြစ်ဖြစ် ၊ တတ်သလောက် English လိုဖြစ်ဖြစ် ရေးစေခြင်ပါတယ်။ ဘားဂလစ်ရှစ်လိုတော့ မရေးစေခြင်ပါ။ ပြောရတာ အားနာပါတယ်။ ကြိုးစားပေးပါ။
http://zawgyi.net/ မှာ ဇော်ဂျီ ကီးဘုတ်ဆိုတာ ယူလိုက်ပြီး အင်စတော လုပ်လိုက်ရင် ရသွားပါမယ်။